Kana Beektuu Laata? Oromo Tribes in Tana River (in Kenya) -
EBLA 15: Ayyaana Guyyaa Goototaa
5 thoughts on “Kana Beektuu Laata? Oromo Tribes in Tana River (in Kenya)”
Warra keenyaa maaluma nuuf wayya laata ? Dhugaa dubbachuuf, ani clipii kana ilaalee imimmaan koon arcaase. Nuti uummati tokkoo faffacaanee wal wallaale. Ani giddu galeessa Oromiyaa irraan dhufe, garuu akka lammiin koo naannoo kana jiru amman bare.
Kun waan ajaybaati.
Rabbiin gargaaree wal itti nu haa qabu.
Waaqayyo haa galatoomu. Yaa lammii jabaadhaa. Waanni dhugaa yeroo n gad bawu dhiyaachati jiraa, wal gargaarree of bilisoomsinee biyya keenyatti nagaa hargannee guyyaa jiraachuu calqabne daba mootummaan Ingilizii uummata keenya irratti hojjate jalaa baanee biyya gaarii, biyya badhaadhinaa uummannaa, jabaannee wal haa gargaarru. Uummanni Oromoo biyya Keenyaa (Keeniyaa) keessa jiraattan ilmaan Oromoo faashistii Tigree jalaa baqatanii issin bira dhufan akka mootummaan Keeniyaa deebisee hin ergine akka dhiibbaa irratti gootan, waan dandeessan hundaan akka nu bira dhaabattan isin gaafanna.
Vey refreshing and encouraging indeed! We want more programs please on such timely issues, thatn is to say, food for the souls! 🙂
Mandoo Sikkoo says:
Ajaa’iba ! Oromoo Rabbiin Umaata bal’aa godhee uumee jira, ajaa’iba !!!!!! Waan hedduu irraa barannee, hedduu namatti tola yaa dhiiroo, ummataa jiidhaa hedduu namatti toluu dha.
Namni waan kana ifa gootee as irra keettee akka ummanni Oromoo bal’aan baru dalagde galata guddaa qabdaa, galatoomii. Kun waan hedduu nama gammachiisuu fi dalagaa boonsaa dalagdan waan ta’eef ammaa achiis kan kana caalaa haala itti ummatni Oromoo hundi arguu danda’uuf midiyaalee gara garaa irratti hojjechuun akka dhiyeessitan abdii dhaan isin eegna. Oromoon keenyaa fi Biyya Oromiyaa keessa jirtan hundi ummata miidhagaa kanaan walbaraan dhaamsa keenna.
Rabbiin akkanatti ballisee fi Dagaagsee nu uume haa galatoomu !
dhugaati ani oromoo tahu koo ani baay’een gammade.